Budata IObit Uninstaller maka Windows
Free Budata maka Windows (24.00 MB)
Budata IObit Uninstaller,
IObit Uninstaller bu ihe nejipu oku igha eji ya nenweghi koodu ikike. Ọ bụ netiti ndị free ngwaọrụ na Windows PC ọrụ nwere ike iji na-arụ kọmputa mmezi na iwepu mmemme nnọọ mfe na ngwa ngwa. A na-eji Windows 10 ewepụ nwayọ nwayọ yana nsogbu nsogbu nke mmemme na-enweghị isi yana data na kọmputa gị.
Nihi na mgbe ị na-eji ihe omume ahụ, ọ ga-ekwe omume iwepu mmemme niile na-esonyeghị na menu Tinye / Wepu Mmemme nke Windows ma ọ bụ na enweghị ike iwepụ ya. Na mgbakwunye, ịnwere ike iwepu ngwa Windows 8, 8.1, 10 nke arụnyere na kọmputa gị.
Na ojiji nke PC, ogologo oge nke ọtụtụ puku mmemme na ngwa na-agbakọ na ndekọ kọmputa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ewepụ mmemme na sistemụ ahụ, resid ndị a ka dị ebe ahụ, na IObit Uninstaller enweghị nsogbu ọ bụla na-elekwasị anya resid ndị a, na-enyere aka ichedo ndekọ kọmputa site na ndenye na-enweghị isi.
Ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla emee na kọmputa gị noge mmemme iwepu ma ọ bụ nhichapụ ihe ndekọ, usoro ihe omume ahụ, nke na-enye gị ohere ịmepụta isi ihe weghachite usoro iji weghachite nsogbu ndị a, na-arụ ọrụ nke ọma na ịchọghị ọrụ a.
Oge ụfọdụ mmelite Windows nwere ike ibute nsogbu, ọkachasị na kọmputa ochie, yabụ ndị ọrụ nwere ike chọọ iwepụ mmelite ndị a. I nwekwara ike wepu mmelite na-ebute nsogbu na PC gị site na iji njirimara nhichapụ Windows Update nke IObit Uninstaller.
I nwekwara ike iji mmemme a wepu ihe mgbakwunye ndị na-emerụ ahụ nke na - emetụta ihe nchọgharị weebụ gị na enweghị ike iwepụ ya. Nime mgbakwunye ndị a, enwere ike zute ọnọdụ dịgasị iche iche, site na mgbakwunye ndị gbanwere homepage na ndị na-agbanwe nyocha ọchụchọ ma ọ bụ gbalịa izuru ozi nkeonwe gị, yabụ ịkwesịrị ịsacha ya na sistemụ gị ozugbo enwere ike.
Gịnị bụ ọhụrụ na ọhụrụ version nke IObit Uninstaller;
Ntinye / Ntinye Ntọala: Meziwanye usoro ndekọ nwụnye dị ka ọrụ ọhụrụ, arụmọrụ ndokwa, faịlụ DDL.
Ahụike Sọftụwia: Mma iwepụ ihe omume fọdụrụ na nkwụnye ihe nrụrụ.
Iwepụ algọridim: Nzi ezi ude maka obere ihe eji eme ihe na mmemme bundled
Iwepụ Mmemme Uninstallable: Iwepụ ngwanrọ isi ike dịka MPC-HC, IntelliJ IDEA, Games Rockstar.
Eziokwu ahụ bụ na ọ dị nefu ma na-abịa na njikwa dị mfe iji rụọ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ dị oke ọnụ ahịa netiti ndị na-apụ apụ. Ọ bụrụ na ịchọta usoro mmemme iwepụ nke Windows enweghị ike ịrụ ọrụ yana ị na-achọ ihe ngwọta dị egwu, ọ ga-abụrịrị netiti usoro mmemme ị kwesịrị ịnwe na kọmputa gị.
IObit Uninstaller Ụdịdị
Nha faịlụ: 24.00 MB
Site na ngwa 10AppsManager, ị nwere ike ihichapụ ma degharịa ngwa ụlọ ahịa Windows arụnyere nime...
Antivirus iwepụ Ngwá Ọrụ bụ mmemme nefu na enweghị ntinye nke na - enyere gị aka ịchọpụta ma wepu...
Norton iwepụ Ngwá Ọrụ bụ a free, obere-size omume na-enyere gị mfe wepu Norton software arụnyere na...
Wise Program Uninstaller bụ sọftụwia na - enyere ndị ọrụ aka iwepụ mmemme. Mara ihe omume...
Total Uninstall bụ mmemme bara uru nke na -enyocha ma na -enyocha usoro nrụnye mmemme na kọmputa gị...
Ọtụtụ mgbe, ndị na -ewepu ọkọlọtọ na -ahapụ faịlụ ndekọ ma ọ bụ akara nke mmemme ị wepụrụ na...
Uninstaller Ngosipụta Ọkwọ ụgbọala bụ ihe na -ewepu mmemme nke na -enyere ndị ọrụ aka iwepụ ndị...
Ashampoo Uninstaller na-eje ozi dị ka onye na-ewepụ ihe na-enye gị ihe ngwọta dị mfe iji wepụ...
ESET Uninstaller bụ ngwá ọrụ ahịrị iwu na-enye aka nke na-enye gị ohere iwepụ ngwa ESET nenweghị...
Ị nwere ike ịnwale mmemme DirectX Happy Uninstall (DHU) iji jikwaa ma wulite mmemme Microsoft...
Ọ bụrụ na arụrụ ọrụ kọmputa gị na-agbada nihi mmemme na faịlụ ndị ọ na-esiri gị ike iwepụ na...
Geek Uninstaller bụ ngwa iwepụ ngwa bara uru nke ị nwere ike iji hichaa sọftụwia nwere nsogbu iwepụ...
DownloadCrew bụ otu nime ebumnuche nwere interface gbagọrọ agbagọ ebe ọ na-echekwa ezigbo mmemme na...
Mmemme ị na-ewepụ na gbakwunye/wepụ mmemme mmemme nke sistemụ arụmọrụ Windows na-ahapụ ụzọ mkpirisi...
Revo Uninstaller bụ nbudata na nbudata nefu nke na-enyere ndị ọrụ aka iwepu mmemme achọghị. Revo...
Ngwá ọrụ Cleanup Chrome bụ mmemme nhicha ihe nchọgharị bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe...
Kaspersky Products Remover bụ ngwa iwepụ mmemme nwere ike ịba uru maka azụmahịa gị ma ọ bụrụ na ị...
Faịlụ Terminator bụ ngwa efu na-enye ndị ọrụ ohere ihichapụ faịlụ ha kpamkpam yana hichaa oghere...
Avast Uninstall Utility bụ ngwa na-ewepụ ngwa ngwa na-enyere gị aka iwepụ ngwaahịa Avast arụnyere...
BCUinstaller bụ ngwa uninstaller nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ngwa ngwa ngwa ngwa...
Emepụtara dị ka ngwa egbu egbu faịlụ dị ka aha ya na-egosi, FileKiller bụ ngwa efu na obere ngwa ị...
Nhichapụ faịlụ nkịtị nwere ike ọ gaghị ezu iji gbochie faịlụ gị ma ọ bụ ozi ịchọrọ ka edobe nzuzo...
Nhichapụ XL bụ ngwá ọrụ mwepụ dị ike ma dị irè nke na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ na mmemme ochie...
Ị nwere ike depụtaghachila faịlụ ndị ị chekwaara na kọmputa gị gaa na nchekwa ma ọ bụ nkebi ndị ọzọ...
Device Remover bụ a ọkwọ ụgbọala na-ewepụ mmemme nwere ike iji kpamkpam nefu ma na-enyere ndị ọrụ...
Pidgin (nke bụbu Gaim) bụ mmemme izi ozi ngwa ngwa nwere ọtụtụ protocol nke nwere ike ịgba ọsọ na...
Ọ bụ mmemme a na-eji ihichapụ mmemme niile na-anọghị na ngalaba tinye-wepu nke kọmputa gị. Ọ...
Mgbe anyị chọrọ idobe kọmpụta anyị ma wepụ mmemme ndị na-adịghị mkpa, anyị na-ejikarị mmemme mmezi...
Anyị enweghị ike nweta kpọmkwem arụmọrụ anyị chọrọ na Windows Add Remove Programs, nke anyị na-eji...